Miyuu OnePlus Band la tartamayaa Xiaomi Mi Band 5? | TeraNews.net
Miyuu OnePlus Band la tartamayaa Xiaomi Mi Band 5?
qoraaga Nikitin Eugenius La daabacay 04.01.2021
Adigoon khibrad u lahayn aag kasta, waa suurtagal in lagu soo bandhigo alaabada suuqa sida ku xusan laba xaaladood. Abuur wax cusub oo gaar ah. Ama, qaado fikradda tartame, beddel oo ku soo bandhig astaantaada. Shirkadda BBK, oo ku dhawaaqday sii deynta OnePlus Band, waxay go'aansatay ikhtiyaarka saddexaad. Qaado Xiaomi Mi Band 5 aasaas oo ka dhig qabow. Marka lagu qiimeeyo muuqaalka, soo-saaraha ayaa ka labalabeeyay muddo dheer mana uusan sameynin nuqul ka mid ah halyeeyga saacadda Xiaomi.
Insider Ishan Agarwal ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in sheyga cusub uu si toos ah ula tartamayo shirkadda Xiaomi Mi Band 5 marka loo eego shaqeynta iyo qiimaha. Shaashadda AMOLED 1.1 inji, ilaalinta IP68, la socodka heerka garaaca wadnaha. Xitaa waxaa jira go'aaminta dheecaanka oksijiinta dhiigga. Qiimaha OnePlus Band waa $ 35.
Ma jiraan wax calaamado tartan ah oo lala leeyahay Xiaomi Mi Band 5 halkan. Haddii kaliya sababtoo ah shaqeynta kooxda OnePlus ayaa aad u xiiso badan. Farxad buuxda, kaliya NFC ayaa ka maqan. Waana wax laga xishoodo in soo saaruhu uusan saadaalin tan. Ka dib oo dhan, adduunka oo dhan ayaa muddo dheer u wareegay farsamadan wireless-ka ah. U oggolow OnePlus Band inuu ku kaco $ 5 dheeraad ah. Laakiin waxay ahayd mid aad u xiiso badan iibsadayaasha. Aynu rajeyno taas ka duwan XiaomiOnePlus kuma dhegi doono hal naqshad, laakiin wuxuu sii deyn doonaa alaab aad u xiiso badan.
Garmin Forerunner 255 iyo Forerunner 955 - waxay ka shaqeeyaan dhiqlaha
Huawei Watch GT2 Pro ECG Edition ayaa hoos u dhacay qiimaha
Hydrofoiler XE-1 - baaskiil biyaha
Saacadaha ugu fiican ee smart 2022 marka loo eego w4bsitXNUMX-dns.com
Daawashada jimicsiga Mobvoi TicWatch GTW eSIM
Waa caqli gal in la iibsado Xiaomi Mi Band 7
Oo giraangiraha kor u qaad oo rinji baabuurka: ATL ayaa u sheegtay sida loo doorto kombaresarada
HUAWEI PixLab X1 waa MFP-gii ugu horreeyay ee astaanta
Huawei MatePad Paper: 3 gudaha 1 buug, xusuus qor iyo tablet
Gigabyte Aorus 17X YE Tilmaamaha Laptop-ka ciyaaraha
Lenovo Yoga 7000 waa mashruuc 8K ah
Qabatinka warbaahinta bulshada
NUM 2022 - Teranews. Dhamaan Xuquuqda Ayaa Leh.